QM oo ka digtay in macaluusha ku fidayso lix gobol oo kale, kuna baaqday gargaar deg deg ah. – Radio Daljir
New York, August 02 – Madaxa arrimaha gargaarka bini’aadanimada ee Qaramada MIdoobay (QM) ayaa sheegtay in lix gobol oo kale oo ku yaal Soomaaliya ay qarka u saaran yihiin in ay ku fiddo macaluusha ka taagan koonfurta Soomaaliya.
Valerie Amost oo ah u qaybsanaha xog-hayaha guud ee QM xiriirinta arrimaha gargaarka, ayaa war-fidiyeenka u sheegtay in ku dhawaad 12 milyan iyo bar dad ah oo ku kala nool waddamada Soomaaliya, Kenya, Ethiopia iyo Jabuuti ay ku sugan yihiin xaalad aad u adag. Waxa ay sheegtay in haddii aan dadkaas si dagdag ah gargaar loola soo gaarin ay xaaladdu sida hadda ay tahay ay ka sii xumaan doonto.
Horay ayay QM u iclaamisay in laba gobol oo ku yaal Koonfurta Soomaaliya ay ka dillaacday xaalad macaluul.
Amos ayaa sheegtay in tobanaan kun oo Soomaali ah ay goor horeba u dhinteen halka boqolaal kun oo kalena ay qarka u saaranyihiin gaajo taasoo saamayn ku yeelan doonta dhammana gobolka oo dhan.
Mar ay ka hadlaysa baahida taagan ayay Amos sheegtay in Midowga Afrika oo gacan ka helaya QM uu qorsheeynayo in uu qabto shir deeq loogu aruurinayo xilli aad u dhow sifo loo gargaaro dadka abaarta la ildaran. Waxa ay tiri maanta waxan maantaba u baahanahay hal bilyan iyo afar boqol oo milyan si aan u badbaadino dad gaaro u dhimanaya.
Abaarta iyo macaluusha taagan ayay ku tilmaantay tii ugu xumayd muddo 60 sano ah, taasoo ay hal-beeg uga dhigatay qaddarka roobabka da’ay, tirada dalalka iyo dadka ay saamaysay iyo tirada xoolaha ku dhintay.